Resources - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
MCRB today publishesasector-wide impact assessment (SWIA) on tourism which highlights some of the positive and negative impacts tourism can have on the country, and the choices to be made.
ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များတွင် ပုဂ္ဂလိကအစုရှယ်ယာရန်ပုံငွေများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (EMPEA) လမ်းညွှန်ချက်များ
ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များတွင် ပုဂ္ဂလိကအစုရှယ်ယာရန်ပုံငွေများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (EMPEA) လမ်းညွှန်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေနှင့် တိုးတက်ရန်အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ပေးသည့်အရင်းအနှီးစသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အခြားသောဈေးကွက်များမှ ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ ဖော်ပြပါ ဥပဒေအချက်အလက်များနှင့် အခွန်စနစ်တို့ကို စီစစ်ဖော်ထုတ်လိုက်ပါသည်။
လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့ ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလုံး ပါ၀င် ထူထောင်ထားသော၊ ACT (ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း၊ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း) သည် အခြေခံလူနေမှုဘဝအတွက် လိုအပ်သည့် လစာ၊ တာ၀န်ယူမှုရှိသော ၀ယ်ယူသည့် အလေ့အထများကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
A “Good Governance Toolkit” in Burmese and English is intended to help owners and managers of businesses in Myanmar reduce the risks of corruption.
Google Safety Centre Booklet (Myanmar Translation)
A guide to staying safe and secure online. This booklet is designed to give you useful hints and tips that are easy to remember and put into action.